९९ वर्षीय पूर्वप्रधानाध्यापकद्वारा १० वर्षीया बालिका बलात्कृत ! - Everest Dainik - News from Nepal
९९ वर्षीय पूर्वप्रधानाध्यापकद्वारा १० वर्षीया बालिका बलात्कृत !
असार २५ ।
भारतको चेन्नइमा एक सरकारी विद्यालयका सेवानिवृत प्रधानाध्यापकले १० वर्षीया बालिकालाई बलात्कार गरेको घटना सार्वजनिक भएको छ । घटना दुई दिन अघि मात्रै सार्वजनिक भएको हो । बालिकालाई बलात्कार गर्ने ९९ वर्षीय पर्शुराम पूर्व प्रधानाध्यापक हुन् । बलात्कार आरोपमा उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको छ ।
याे पनि पढ्नुस एक सातामा ६ बलात्कार, अधिकांश आफन्तबाटै !
घटना यसरी पत्ता लाग्यो
याे पनि पढ्नुस ६ महिनादेखि प्रिन्सिपलबाटै किशोरी बलात्कृत !
सुरक्षा अधिकारीका अनुसार बलात्कार आरोपी पर्शुरामका सात बच्चा छन् । शनिबार पीडित बालिकाका आमाबुबाले उनीविरुद्ध बलात्कारको मुद्धा दर्ता गरेका छन् । आरोपी पर्शुरामले पनि आफूले जबरजस्तीकरणी गरेको स्वीकार गरेका छन् । -अमर उजाला
ट्याग्स: ९९ वर्षीय प्रधानाध्यापक, balatkar, India